5 NeeBhari Best With Live Umculo EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 NeeBhari Best With Live Umculo EYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 05/03/2021)
NeeBhari umculo live izakuvelisa yonke eYurophu, kokunikela indlela ukubulala ixesha kwindawo eliphilileyo apho iziselo neengoma flow ezamahala. Ukuba ujonge ukonwaba edolophini ngexesha lakho uhambo ngololiwe, siyifumene amanye amacebiso. Nazi phezulu yethu 5 imivalo umculo live lonke elaseYurophu:
1. Live Umculo At The Record Shop, Paris, Fransi
kwirekhodi Shop yenye imivalo ezingcono umculo yaphila France. Kuyinto nje ngaphandle Bastille kwisitishi metro. Hayi nje ukuba lula ukuya, kodwa ke nalo ezimnandi kakhulu. Ibar ngaphambili, kwaye inenqanaba lokwenyani lekhonsathi ngasemva indawo yomculo, nendawo yabaphulaphuli efihliweyo emva kwayo.
abantu balapha bancoma ukufumana ubhukisho ukuba undwendwele le bhar yomculo ikhoyo ikwi uluhlu lokuhlola. Ngenxa entry ukhululekile, kunokuba nzima ukufumana isitulo kwi bar. Wakuba wena ku, uya kunandipha zonke iintlobo zezixhobo zomculo, ephilayo ngokupheleleyo.
2. Live Umculo At Ulwelo, Luxembourg City, Laksembheg
An bar umdla kunye nomculo kutshanje wabeka Luxembourg phezu imephu yasebusuku European. ulwelo Cafe ibekwe kwindawo ezibukekayo Grund of Luxembourg. Ukuba unayo zombini zewayini cocktail kunye abathandi craft beer kumsitho zokuhamba wakho, le ndawo ukuya.
Nokuba wena unandipha kakhulu kokuhlala ku Luxembourg, mhlawumbi uza kukwazi ukubamba umculo ibonisa bahlala Ulwelo ngooLwezibini nangooLwezine. Ukuba njengegorha weeknight, le ndawo ukuba.
Munich ku Amsterdam Uqeqesha
3. i iindonga, eRoma, ElamaTaliyane
Ngaba unokuyithelekelela ukufumana ibhari omtsha yobulali nge umculo live ukutyelela wonke ebusuku ngexesha iholide yakho zaseYurophu? Faka i iindonga, omnye kakhulu imivalo umculo live edume kweRoma, kunye gig njalo ebusuku.
Le bar ngayo indawo enembali okulungileyo intliziyo kwindawo umfundi San Lorenzo kuthetha uza kukwazi ukuhlangabezana abaninzi bendawo umdla. Kukonke, ngokuba lakwa- amava waseRoma, Le Mura umele-utyelelo - nakweyiphi ngobusuku evekini.
4. the Parrot, London, Igreat Britain
Kubonakala, Idris Elba uyazi zeziphi izithako ukudibanisa kwi bar kwamnandi kunye nomculo. bar lakhe okuphambili, the Parrot, ise-Aldwych kwaye unikeza ngamava kuphela.
Nangona indlu band kusilungiselela ngomdlalo fantastic, wena Asifuni kuphoswa uMnu. iiseti DJ Elba kaThixo rhoqo. Injalo loo nto - umdlali Hollywood udla inxaxheba kule fun ngokwenza ngeeseti DJ, ukuba ukuziyolisa bha abathengi '. cocktails ngokuqaqambileyo-bala ngokukhanyisa mood ngakumbi kule ntaka-ezinezihloko live bar umculo lemvula.
5. i Waterhole, Amsterdam, Inetherlands
Into evuyisa abakhenkethi kanti abantu abathanda le bar umculo live, i Waterhole sele kulithuba ngaphezu 25 iminyaka. nanini na tyelela Amsterdam, uya kuba nento ayisondezayo kuwe, ngalo lonke ixesha nasemini. On ilanga liphume, akukho nto ilunge ngaphezu iphumle phezu kwenye ebanzi bar ngayo.
Ukuba lula ukufikelela phezulu kuluhlu lwakho kuqala, I Waterhole uthatha isithsaba le bar ezingcono umculo yaphila Amsterdam. Ngenxa yokuba indawo yayo engundoqo, ivame ezixineneyo. Esinye isizathu sokuba izihlwele abathanda ukuba lilixa wonwabile, okuhlala kuze 9 PM!
Ukutyelela nayiphi na Best Live Umculo neeBhari indlela egqibeleleyo ukuqala okanye ukuphelisa yakho Europe Train Trip, njalo Incwadi Amatikiti akho Ngoku!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 NeeBhari Best nge Live Umculo eYurophu” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bars-live-music-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#ibhere yokusela #imusic #liveshow #ibar yomculo europetravel yasebusuku travelamsterdam travelfrance travelparis